Ihe kpatara na otu esi edozi akaụntụ gravatar | Martech Zone
Saturday, July 18, 2015 Wednesday, July 22, 2015 Douglas Karr
Otu ihe zuru oke maka ikike na-abawanye na ogo ogo engine engine na-enweta aha na saịtị dị mkpa gbasara saịtị, akara, ngwaahịa, ọrụ ma ọ bụ ndị mmadụ. Ndị ọkachamara n'ihe gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe na-ekwurịta okwu kwa ụbọchị. Ha ghotara na ichota ndi ahia ha nlezianya nke di na ntaneti ahu. Site na mgbanwe algorithm, ọ bụkwa usoro bụ isi iji melite gị isiokwu rankings na engines ọchụchọ.
N'oge ụfọdụ, anyị enweghị ohere ịgba ajụjụ ọnụ ma ọ bụ dee banyere ngwaahịa mana olulu ahụ dị mma nke na anyị na-akpọ ndị ọkachamara PR ka ndị ahịa ha dee post ndị ọbịa. Isiokwu a bụkarị ihe kachasị mfe nke njikọ a, ụlọ ọrụ dị njikere karịa ịnye edemede. Anyị na-esetịpụrụ ụfọdụ ihe achọrọ maka ha:
Gbalịa idobe ọdịnaya dị n'etiti okwu 500 na 1,000.
Kọwaa nsogbu ndị ahịa nwere ma gbalịa ịnye ụfọdụ ọnụọgụ akụrụngwa na-akwado mbido.
Nye usoro kachasị mma iji dozie nsogbu ahụ.
Ọ bụrụ na ị nwere ngwọta teknụzụ, nye nkọwa banyere otu o si enyere aka.
Tinye nseta ihuenyo, eserese, eserese ma ọ bụ - ọkachasị - vidiyo nke azịza ya.
Anyị anaghị achọ oge imechi, mana mee ka anyị mara maka ọganihu.
Deba aha onye edemede ya na Gravatar ma nye anyị adreesị ozi-e nke ndị ode akwụkwọ ha debanyere aha.
A ga-atụkwasị onye edemede ahụ na akwụkwọ akụkọ anyị ma enwere ike ịkpọtụrụ ya maka ntinye. Ọ bụrụ na post ahụ na-ewu ewu, anyị nwere ike ịme pọdkastị gbasara isiokwu a.
Debanye aha onye edemede na Gravatar dị mkpa ka ọ bụrụ na ha nwere ike ijikwa onyinyo ahụ egosiri na profaịlụ onye edemede ha. Enweghị ya, a ga-ajụ anyị mgbe niile melite foto ndị edemede anyị achọghịkwa ijikwa nke ahụ. Gravatar bụ ọrụ dị mfe yana na mmasi kachasị mma nke onye ode akwụkwọ iji mee ihe ka ha nwee ike ịnwe onyogho a na-enyo enyo na weebụ - ọ bụghị naanị na saịtị anyị.
Kedu ihe bụ Gravatar?
Site na ebe nrụọrụ weebụ Gravatar:
"Avatar" bụ ihe oyiyi na-anọchite anya gị n'ịntanetị-obere foto nke na-egosi n'akụkụ aha gị mgbe ị na-emekọrịta na weebụsaịtị. A Gravatar na-bụ Avatar Amatara N’uwa. Upload na-ebugo ya ma mepụta profaịlụ gị naanị otu oge, mgbe ahụ ị ga-esonye na saịtị ọ bụla enyere Gravatar, ihe oyiyi Gravatar gị ga-eso gị na-akpaghị aka. Gravatar bụ ọrụ n'efu maka ndị nwe saịtị, ndị mmepe na ndị ọrụ. A na-etinye ya na akaụntụ WordPress.com ọ bụla na-akpaghị aka ma na-akwado ya Automattic.
Gịnị Mere Anyị Ji Eji Gravatar?
Ndị mmadụ na-agbanwe foto profaịlụ ha na saịtị mgbasa ozi ha. Ha nwere ike ịgbanwe ụdị ntutu, ma ọ bụdị nwee foto ọhụụ ọhụụ. Ọ bụrụ na ị dee ederede ederede maka mbipụta, kedu ka ha si emelite foto gị na nke kachasị ọhụrụ? Azịza ya bụ Gravatar.
Na WordPress, edere foto onye edemede site na eriri ezoro ezo nke email email onye edemede. Adreesị ozi-e nke onye edemede anaghị egosipụta n’ihu ọha. Na akaụntụ Gravatar ga-enye gị ohere ijikwa ọtụtụ adreesị email na akaụntụ ahụ, na ọtụtụ onyonyo.
Tags: odeeonye edemede profaịlụavatargravatar
Ọkt 17, 2007 na 10:59 PM
Ọ bụrụ n'ịhụ Gravatar a ebe ọ bụla na weebụ, ọ bụ m!
Ọkt 18, 2007 na 4:20 AM
Anaghị m eji Gravatar kama kama ana m eji MyAvatar nke bụ ngwa mgbakwunye maka WordPress.
Nke a na - enye ohere ka ihe ahụ mee ma ọ bụ naanị na avatar ahụ egosiri na nke MyBlogLog ga - adị.
Nke a mere ka ọtụtụ ihe belata n'ihi na ọtụtụ ndị na - agụ ya agaghị eme ihe ọzọ iji bulite avatar naanị maka ịde blọgụ. 🙂
Ọkt 18, 2007 na 11:35 AM
Ahụrụ m gravatars n'anya ma enwere m obi ụtọ na ha mere ya. Olileanya, ọ ga-seemlessly ike n'ime wordpress ọzọ mbipute…
Enwere ezigbo nyocha nke gravatars na http://www.thetechbrief.com/2007/10/12/get-yourself-a-gravatar-while-theyre-still-hot/
Ọkt 19, 2007 na 12:12 AM
Ma ugbu a, ọ bụ kpam kpam free ọrụ - tinye dị ka ọtụtụ avatars na email id ị na ị chọrọ 🙂
Jenụwarị 8, 2008 na 10:59 PM
Emeela m klas Gravatar ma ọ bụrụ na ịpị njikọ njikọ ahụ n'aha m. Ejikọtara ọnụ na-arụ ọrụ dị ka nrọ - o nwekwara oghere na ụbọchị mmebi maka avatar - ịchekwa na oge nkwụnye ụgwọ. Ọ nwere ike ịbudata avatar na mpaghara.
Adam @ Kpọtụrụ anyị